किन विश्वकै सर्वाधिक डिसलाइक पाउने ट्रेलर बन्यो ‘सडक २’ ? « रंग खबर
किन विश्वकै सर्वाधिक डिसलाइक पाउने ट्रेलर बन्यो ‘सडक २’ ?
रंगखबर, काठमाडौँ – ‘सडक २’को ट्रेलर युट्युबमा विश्वकै सर्वाधिक डिसलाइक पाउने ट्रेलर बनेको छ । फक्सस्टार युट्युब च्यानलबाट रिलिज भएको ट्रेलरले यो सामाग्री तयार पर्दासम्म ७० लाख डिसलाइक पाएको छ ।
दर्शकले बलिउडकर्मीका नातेदारहरुको फिल्म बहिस्कार गर्ने ट्रेण्ड नै चलाए । त्यसैको परिणाम स्वरुप ‘सडक २’को ट्रेलरमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी डिसलाइक आएको हो । ट्रेलरको कमेन्ट बक्समा पनि कथाबस्तु र प्रस्तुतिलाई लिएर खासै प्रतिक्रिया आएका छैनन् । कमेन्ट बक्समा ट्रेलरलाई बहिस्कार गर्ने भन्ने खालका प्रतिक्रिया मात्र पोस्टिएका छन् ।
महेश भट्ट निर्देशित ‘सडक २’मा संजय दत्त, अलिया भट्ट, आदित्य रोय कपूर, पूजा भट्टको मुख्य भूमिका छ । फिल्म २८ अगस्तमा डिज्नी प्लस हटस्टारबाट रिलिज हुँदैछ ।